HomeWararka CiyaarahaMohamed Salah oo ku dhow inuu qandaraas cusub u saxiixo Liverpool
November 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Warka Xiisaha Leh 0
Mohamed Salah ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhow yahay inuu heshiis waqti dheer ah u saxiixo Liverpool , isagoo mustaqbalkiisa u hibeyn doona Reds.
Arinta ku saabsan heshiiska boqorka Masar ayaa ah mid ay taageerayaashu in badan ka hadleen, laakiin waxay u muuqataa in kooxdu ay ku dhawaatay inay xaliso dhibaatadan.
Qandaraaska uu haatan kula jiro waxa uu dhamaan doonaa xagaaga soo socda taaso keentay in uu ka argagaxo waxa uu doonayo in uu sameeyo.
Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday TEAMtalk weeraryahanka Liverpool ma waydiinayo £500,000 todobaadkii, in kasta oo ay jiraan soo jeedinno taasi ahayd.
Sidoo kale waxaa la sheegay in la filayo in kooxdu ay heshiis la gaarto Salah iyo wakiilkiisa mustaqbalka dhow kaasoo ku xiri doona xiddiga heerka caalami ee dalka Masar iyo Reds.
29-sano jirkaan ayaa ku jiray gooldhalinta isbuucaan markii Liverpool ay garaacday Arsenal, taasoo aheyd goolkiisii ​​11-aad ee xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigeysa ciyaaryahanka ugu goolasha badan Premier League xilligan.